PaGomo reSinai (1-25)
Israeri achava umambo hwevapristi (5, 6)
Vanhu vanotsveneswa kuti vasangane naMwari (14, 15)
19 Mumwedzi wechitatu vaIsraeri vabuda munyika yeIjipiti, pazuva rimwe chetero, vakasvika kurenje reSinai. 2 Vakatama kuRefidhimu,+ vakasvika kurenje reSinai, vakadzika musasa murenje. Israeri akadzika musasa ipapo pakatarisana negomo.+ 3 Mozisi akabva akwira kuna Mwari wechokwadi, uye Jehovha akamushevedza ari mugomo,+ achiti: “Unofanira kuudza imba yaJakobho izvi uye uzivise vaIsraeri kuti, 4 ‘Imi makazvionera mega zvandakaitira vaIjipiti,+ kuti ndikutakurei pamapapiro emakondo ndichikuunzai kwandiri.+ 5 Saka kana mukanyatsoteerera inzwi rangu uye mukachengeta sungano yangu, muchava pfuma yangu yandinokoshesa pakati pemarudzi ese,+ nekuti nyika yese ndeyangu.+ 6 Muchava kwandiri umambo hwevapristi nerudzi rutsvene.’+ Aya ndiwo mashoko aunofanira kuudza vaIsraeri.” 7 Saka Mozisi akaenda, akashevedza vakuru vevanhu, akavazivisa mashoko aya ese aakanga arayirwa naJehovha.+ 8 Pashure paizvozvo vanhu vese vakapindura pamwe chete vachiti: “Tinobvuma kuita zvese zvataurwa naJehovha.”+ Mozisi akabva angodzokera nemhinduro yevanhu kuna Jehovha. 9 Uye Jehovha akati kuna Mozisi: “Inzwa! Ndiri kuuya kwauri ndiri mugore dema, kuti vanhu vanzwe pandinotaura newe uye kuti vagare vachitendawo mauri.” Mozisi akabva audza Jehovha mashoko evanhu. 10 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Enda kuvanhu, uvatsvenese nhasi namangwana, uye vanofanira kugeza zvipfeko zvavo. 11 Vanofanira kunge vagadzirira panozosvika zuva rechitatu, nekuti pazuva rechitatu Jehovha achaburuka achiuya paGomo reSinai vanhu vese vachiona. 12 Unofanira kuisira vanhu miganhu uchiritenderera rese, wovaudza kuti, ‘Ngwarirai kuti musakwira mugomo, kana kutsika pamuganhu waro. Munhu wese anobata gomo iroro chokwadi achaurayiwa. 13 Hapana ruoko runofanira kumubata, asi achaita zvekutemwa nematombo kana kupfurwa.* Ingava mhuka kana kuti munhu, haazorarami.’+ Asi kana hwamanda yenyanga yegondohwe+ yarira vanogona zvavo kukwira mugomo.” 14 Mozisi akabva aburuka mugomo akaenda kwaiva nevanhu, akatanga kuvatsvenesa, uye vakageza zvipfeko zvavo.+ 15 Akati kuvanhu vacho: “Gadzirirai, zuva rechitatu rava kusvika. Musarara nemadzimai enyu.”* 16 Mangwanani ezuva rechitatu, pakava nemabhanan’ana nemheni, uye gore dema+ rakavapo pamusoro pegomo, pakava nekurira kukuru kwehwamanda, uye vanhu vese vakanga vari mumusasa vakatanga kudedera.+ 17 Mozisi akabva abudisa vanhu mumusasa kuti vanosangana naMwari wechokwadi, uye vakanomira mujinga megomo. 18 Gomo reSinai rese rakapfungaira, nekuti Jehovha akaburuka achiuya pamusoro paro ari mumoto;+ uye utsi hwaro hwaikwira seutsi hwebisiro,* uye gomo rese rakanga richizununguka zvinotyisa.+ 19 Kurira kwehwamanda pakwairamba kuchiwedzera, Mozisi akataura, uye inzwi raMwari wechokwadi rakamupindura. 20 Saka Jehovha akaburuka achiuya pamusoro peGomo reSinai. Jehovha akabva ashevedza Mozisi kuti akwire pamusoro pegomo, Mozisi akakwira.+ 21 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Buruka unoyambira vanhu kuti vasaedza kupfuura muganhu vachiuya kuzoona Jehovha, nekuti kana vakadaro vazhinji vavo vangafa. 22 Uye vapristi vanogara vachiswedera kuna Jehovha ngavazvitsvenesewo, kuti Jehovha arege kuvarova.”+ 23 Mozisi akabva ati kuna Jehovha: “Vanhu havakwanisi kukwira muGomo reSinai nekuti makatiyambira kare muchiti, ‘Isai miganhu muchitenderera gomo, muriite dzvene.’”+ 24 Asi Jehovha akati kwaari: “Enda, buruka, wozodzoka, iwe naAroni, asi usarega vapristi nevanhu vachipfuura muganhu vachiuya kuna Jehovha, kuti arege kuvaparadza.”+ 25 Saka Mozisi akaburuka, akaenda kwaiva nevanhu, akavaudza izvozvo.
^ Zvichida kupfurwa nemuseve.
^ ChiHeb., “Musaswedera pedyo nemukadzi.”